Ọ bụrụ na ị maara onyinye Chineke | Apg29
Ọ bụrụ na ị maara onyinye Chineke
Ọtụtụ ndị taa na-ebi ndụ na ngụkọta amaghị banyere Chineke na ndụ na Ọ na-enye.
Mgbe ị tụkwasịrị obi na Jizọs, ị ga-a nwa Chineke. Mmụọ Chineke na-adọrọ n'ime obi gị ma ị na-jupụtara n'ịhụnanya Chineke. Jizọs ji tụnyere ya miri di ndu.
Jizọs nọdụrụ na olulu mmiri, na-ekwu okwu na a nwaanyị.
"Jizọs zara, si ya: Ọ bụrụ na ị maara onyinye Chineke na Onye Ọ bu Nke nāsi gi, Nyem miri ka M'ṅua, mgbe ahụ, ị ​​gaara arịọ ya, ọ ga-nyere gi miri di ndu." Jon. 4:10
Ọtụtụ ndị taa na-ebi ndụ na ngụkọta amaghị banyere Chineke na ndụ na Ọ na-enye. Mgbe ahụ, e nwere ndị na-eche na ha maara ihe ọ bụ banyere Olee ihe enyemaka, ma na kemgbe a delusion emepụta iche iche.
Iji chọpụta Chineke na-enye onye ọ bụla dị mkpa ka ị na-atụgharị nke Bible. Mgbe Baịbụl kwuru, ị ga-mwute ikwu na ọtụtụ mmetụta dị ka "agwụ na mee akwụkwọ". Ọ bụ ezie na nke a bụ a aghụghọ.
Gịnị ka ọ bụ banyere mgbe ahụ?
The ịhụnanya nke Chineke e kpugheere anyị site Ọkpara Chineke, Jizọs weere mmehie anyị ntaramahụhụ na cross. Chineke butere ụzọ na-enye anyị mgbaghara nke mmehie. Anyị nwere ike inwe akọnuche dị ọcha. Chineke chọrọ iji gosi na ya hụrụ anyị n'anya mgbe anyị na-ahọrọ ka ha kwere na Jizọs.
The nwaanyị ahụ Jizọs kwuru okwu ya na echiche na ọ na-ekwu nkịtị mmiri. Ọ bụ ọbụna onyinye Chineke na onye ọ bụ na gwara ya okwu.
"Jizọs zara, si ya: Onye ọ bụla na-aṅụ nke a mmiri ga-mmiri na-agụ ọzọ. Ma onye na-aṅụ mmiri m na-enye ya ga dịghị mgbe akpịrị ịkpọ nkụ. Enweghị mmiri nke m ga-enye ya ga-abụ na ya a isi iyi nke mmiri eju ndụ ebighị ebi. " Jon. 4: 13-14
The okwu na Bible na-e dere site ndị mmadụ, ma, ha bụ okwu na sitere n'ike mmụọ nsọ Chineke. The nwaanyị aghọtaghị mbụ enweghị nke ikpeazụ, bụ onye na-ekwu okwu ya. Mgbe ị na-akụkụ nke Bible, na-aghọta na mgbe ị na-akụkụ nke okwu Chineke, eluigwe na ụwa. Na-enye na nke a bụ na i nwere ike a isi iyi dị n'ime gị. A isi iyi na-eme nke ọma na mgbe na-agba ọsọ na-akọrọ. Mgbe ahụ ị na-adịghị anya n'ebe a na n'ebe ahụ. Ị mgbe ahụ nwere onyinye nke ndụ dị n'ime gị. Mọ nke Chineke chọrọ ka ha biri n'ime gị. Ọ chọrọ inyere gị aka ibi ndụ ndụ Ndị Kraịst. Ọ bụ ihe magburu. A onyinye nke ndụ, na udo, ịhụnanya na ọṅụ. All n'ihi ihe Jizọs meere anyị site n'ọnwụ ya na mbilite n'ọnwụ. Nke a, enyi m, ọ outclasses ụwa a agbajikwa olulu mmiri. Sin tụfuru arịrịọ ya mgbe ị na-nụrụ ụtọ onyinye Chineke.
Olee otú enweta onyinye Chineke?
"... mgbe ahụ ị gaara arịọ ya, '- ndina na Jesus ndụ mmiri
"... ma ọ ga-nyere gi miri di ndu." - Jizọs na-enye gị ndụ, mgbe ị na-ajụ ya.
Ị na-adịghị aghọta nnọọ ihe niile, ma ị nwere ike n'enweghị mara na Chineke na-egboro ezi onyinye. Tụleenụ ihe nke mmiri ndụ taa. Ọ ọcha gị na-enye gị ọhụrụ ike, na ndụ. Mepee Bible na-agụ ihe banyere ndị na-akpali akpali ndụ na Jesus.